Ingxelo yokufikelela | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Ingxelo yokufikelela
Umasipala waseHultsfred ungasemva kwale webhusayithi. Sifuna abantu abaninzi kangangoko banakho ukusebenzisa iwebhusayithi. Olu xwebhu luchaza indlela hultsfred.se ehambelana ngayo nomthetho wokufikeleleka kwinkonzo yoluntu yedijithali, naziphi na iingxaki zokufikelela kunye nendlela onokuthi uxele ukusilela kuthi ukuze sikwazi ukuzilungisa.
Ukunqongophala kokufumaneka kwiindwendwe
Okwangoku, siyazi ukuba asiphumelelanga ukuhlangabezana nazo zonke iikhrayitheriya ze-WCAG kula manqaku alandelayo, phakathi kwezinye.
Kukho amaxwebhu e-pdf kwiwebhusayithi angafikelelekiyo. Ezinye zeefayile ze-pdf, ngakumbi ezindala, kwiwebhusayithi ngamaxwebhu afundwayo angenakufundeka njengoko esekwe kumaxwebhu angabhalwanga ngekhompyutha. Siswele ithuba elifanelekileyo lokuyilungisa le nto.
Icandelo lewebhusayithi alihlangabezani neemfuno xa kuziwa, umzekelo, umahluko kunye nokufomatha.
Eminye imifanekiso kule ndawo ayinawo umbhalo we-alt.
Iitafile ezininzi kwiwebhusayithi azinazo iinkcazo zetafile
Kukho iinkonzo ze-e kunye neefom ezingahambelaniyo nemigaqo yokufikeleleka.
Siqale umsebenzi olandelelanayo ukulungisa iingxaki ezinokufikeleleka nokuqeqesha abahleli bewebhu.
Nxibelelana nathi ukuba ufumana iingxaki
Sisoloko sizama ukuphucula ukufikeleleka kwewebhusayithi. Ukuba ufumanisa iingxaki ezingachazwanga kweli phepha, okanye ukuba uyakholelwa ukuba asihlangabezani neemfuno zomthetho, sazise ukuze sazi ukuba ingxaki ikhona. Ungaqhagamshelana neziko lethu loqhakamshelwano ku:
Ifowuni: 0495-24 00 00
Nxulumana negunya lolawulo
Igunya lolawulo lwedijithali linoxanduva lokujonga umthetho wokufikeleleka kweenkonzo zikarhulumente zedijithali. Ukuba awanelisekanga yindlela esiziphatha ngayo izimvo zakho, ungaqhagamshelana neGunya loLawulo lweDijithali kwaye uyixele.
Sivavanye njani indawo
Senze uvavanyo lwangaphakathi lokuzihlola hultsfred.se. Olona vavanyo lwakutshanje lwenziwe nge-20 Agasti 2020.
Ingxelo yagqityelwa ukuhlaziywa ngoSeptemba 8, 2020.
Ulwazi lobuchwephesha malunga nokufikeleleka kwewebhusayithi
Le webhsayithi iyahambelana noMthetho wokuFumaneka kweNkonzo kaRhulumente weDijithali, ngenxa yeempazamo ezichazwe ngasentla.